'Yaan hub laga iibinin dalalka Khaliijka khilaafka Qadar awgii' - BBC News Somali
Image caption Bob Corker ayaa sheegay in Golaha iskaashiga Khaliijku uu doortay in uu khilaafka sii baahiyo
Seneter saamayn badan leh oo Maraykan ah ayaa sheegay in uu hor istaagi doono heshiiskii hubka lagaga gadi lahaa dalalka Carbeed ee Khaliijka tan iyo inta ay kala imanayaan "jid toosan" oo lagu xaliyo khilaafka Qadar.
Waxay Qadar ku eedeeyeen in ay taageerto Argaggixisada iyo Iiraan - laakiin way diiday eedaymahaas.
Image caption Duulimaadyadii Doxa sii marijiray ee diyaaradaha Qatar Airways ayuu khilaafkani carqaladeeyay
Afhayeen u hadlay Qadar ayaa sheegay in shuruudahan ay xaqiijiyeen " in go'doominta sharcidarrada ah aysan wax xiriir ah la lahayn la dagaalanka argagixisada - ayna tahay isku day lagu xaddidayo madaxbannaanida Qadar iyo siyaasaddeeda arrimaha dibadda".
Qadar waxaa ku nool 2.7 milyan oo ruux.
Qof ku dhintay dhismaha garoomada Qadar
Laakiin Wasiirkiisa Arrimaha Dibadda Rex Tillerson, ayaa qiray Axaddii in qaar ka mid ah dalabyada ay soo gudbiyeen dalalkaasi ay dariska yihiin ay "adkaandoonto in la helo" wuxuuna ku baaqay wadahadal xal lagu gaaro.
Image caption Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson iyo madaxweyne Donald Trump ayaa ka qaybgalay shirkii Golaha Iskaashiga Khaliijka
Xisbiga Jamhuuriga ayaana lala wadaagay in madaxweynuhu uu lixda dal ee Khaliijka oo Qadar ay ku jirto uu kula heshiiyay "in ay gacan ka gaystaan yaraynt khilaaafaadka gobolka" ayna yeeshaan iskaashi wayn oo dhanka ammaanka ah".
"Nasiib darroso dalalkii Khaliijku ma aysan ka faa'iidaysanin kulankaas ee taas badalkeeda waxay doorteen in ay khilaafka sii baahiyaan," ayuu intaas ku sii daray.
"Dalalka gobolka oo dhan waxay u baahan yihiin in ay wax wayn ka qabtaan la dagaalanka argagixisada, laakiin murankii u dambeeyay ee soo kala dhexgalay dalalka Khaliijka wuxuu curyaaminayaa oo kali ah dadaaladii lagula dagaalamayay kooxda isku magacawda Dawladda Islaamka iyo kuwii lagu xakamayn lahaa Iiraan.
"Sababahaas daraadood waxaan u baahannahay in aan fahan fiican ka helno habka lagu xallinayo khilaafka Khaliijka soo kala dhexgalay ka hor in aanaan fasax dheeraad ah siinin hubka iyo qalabka milatari ee laga iibinayo dalalka Khaliijka.
• 13 shuruudo oo lagu xiray la heshiinta Qadar
Turkiga oo go'doominta Qadar ku tilmaamay mid ka baxsan aadanaha
Dalal Carbeed oo xiriirka u jaray dawladda Qadar